Fampiharana 10 manana andraikitra manokana mety tsy fantatrao momba | Androidsis
Fampiharana 10 miaraka amina fampiasana manokana ary mety hilaina ilaina izany
ny fampiharana tena ilaina izay azontsika atao amin'ny findaintsika dia fantatry ny ankamaroan'ny olona rehetra. Rehefa lasa manam-pahaizana amin'ny Android ianao, rehefa zatra io OS io tamin'ny fitaovana finday nandritra ny taona vitsivitsy, dia sarotra indraindray ny mahita iray izay manolo ireo fantatry ny rehetra. Ary na dia toa nifarana aza ny firoboroboan'ny famoronana rindranasa, ny zava-misy dia betsaka ireo manohy manandrana tolo-kevitra tsara kokoa amin'ny endrika fampiharana ny fomba sy endrika rehetra. Ny ataon'ireo fampiharana rehetra ireo dia matetika mampiditra Material Design, noho izany amin'ny endrika dia tena nahagaga tokoa izy ireo.
Amin'ny fidirana anio hitondra fampiharana 10 maivana izahay Miezaka ny miavaka amin'ny hafa izy ireo amin'ny fisehoana mahaliana sasany ary mety ho fantatry ny sasany aminareo. Na dia manantena ihany koa aho fa hahagaga anao ary ny iray amin'ity lisitra ity dia mety ho lasa ilay tena ilaina amin'ny alàlan'ny fanolorana traikefa miavaka na miavaka. Misy sokajy isan-karazany, koa ndao handroso hijery ireo fampiharana 10 tena ilaina ireo.
1 SHAREit: Famindrana rakitra, fizarana
SHAREit: Famindrana rakitra, fizarana
Mba hamindrana rakitra, sary, horonan-tsary na karazana atiny hafa dia fampiharana mahaliana amin'ity lahasa ity ny SHAREit. Miorina amin'ny mamorona tambajotra Wi-Fi eo an-toerana ary amin'ny famoronana "hotspot" amin'ny telefaona mandefa ilay rakitra. Ny fitaovan'ny mpandray koa dia mila mametraka ny fampiharana. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy tsara indrindra dia ny haavony fa avo kokoa noho ny ampiasaina amin'ny Bluetooth, ka ho an'ny asa sasany dia afaka manaisotra anao amin'ny olana ianao.
Azo ampiasaina amin'ny mamindra rakitra avy amin'ny PC mankany amin'ny telefaona na ny mifamadika amin'izany, noho izany dia samihafa ny toetrany.
SHAREit: Mizara rakitra
Ny kalitao tsara an'ity fampiharana ity dia izy io mahay mandika lahatsoratra rehetra Sakanan'ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo izany ary azo apetaka ao amin'ny app ho tianao izay tianao. Ny fampiharana dia miasa amin'ny haitao OCR izay hahafantatra ny lahatsoratry ny pikantsary nalaina mba handika azy io amin'ny takelaka misy ny fitaovana.
Rindrambaiko ho an'ny mpampiasa mandroso mitady asa mandeha ho azy amin'ny fitaovana, fa tsy mila Tasker ho an'ny interface sarotra izy ireo. Mora ny manampy makro hahafahana manomana izany automatique izany. Ny zavatra tsara indrindra momba ity fampiharana ity dia ny efa namboarina mialoha miaraka amina maodely maherin'ny 100 izay azonao ampiasaina amin'ny lahasa isan'andro. Ny kinova maimaim-poana dia voafetra amin'ny macros miisa 5.
MacroDroid - mandeha ho azy
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Google Maps ho an'ny sarintany ivelany. Talohan'ny famoahana ny Nokia HERE Maps ho an'ny Android, sarotra ny nahita fampiharana an-tsarintany izay tena nisy ireo sarintany ivelan'ny Internet, noho izany ny Maps dia nahazo mpampiasa bebe kokoa isaky ny mandeha. Ny kalitao lehibe dia ny famelana anao hijerena nefa tsy mila mampiasa ny fifandraisana data. Ahitana fampahalalana momba ny magazay, tobin-tsolika ary maro hafa.
MAPS.ME: Sarintany an-tserasera GPS Nav
Ity fampiharana ity dia mety ho ny fampiharana fitoeram-bokatra ho an'ny fitaovanao Android. Izany no fomba fiasan'izy io. Rehefa avy nametraka ilay app ianao, isaky ny mamafa rakitra, sary na horonantsary ianao dia hoentina any Dumpster ka afaka andro vitsivitsy dia hamafana azy ho azy. Fampiharana tonga lafatra hahafahana mamerina rakitra voafafa raha zatra izany isika.
Fampiharana tonga lafatra ho an'ny tazomy ny efijery tsy mila manitatra ny vanim-potoana fampiatoana. Fampiharana tena tsotra izay mirakitra ny orientation na ny fivezivezin'ny fitaovana ary mitazona ny fitaovana hiasa tsy misy fifandraisana amin'ny fitaovana.
Ao anatin'ny hafanan'ny Link Bubble dia noforonina ny Flynx Browser hamela ny fandefasana pejy pejy mba hahafahanao mamaky azy ireo rehefa vonona izy ireo. Fampiharana tonga lafatra handefasana ireo URL ireo raha manohy mizaha ilay rindranasa misy antsika, toy ny tamba-jotra sosialy na fampiharana fandefasan-kafatra.
Flynx - Vakio tsara ny tranonkala
Ity fampiharana ity dia miasa ho clone misy fampiharana amin'ny tontolon'ny boaty fasika rehetra mba hahafahanao manana tranga roa mifanindran-dàlana amin'ilay fampiharana mitovy nefa tsy mila mizara angona eo amin'izy ireo. Azonao atao ny mampihetsika kaonty WhatsApp roa amin'ny alàlan'ny fampiasana tarehimarika roa amin'ny fitaovana iray. Raha mitady fomba hafa hafa ianao, manana App Cloner ianao.
Space parallel - kaonty marobe
Mihetsika toa a sivana jiro manga ho an'ireo fitaovana tsy manana fomba famakiana anatiny. Ny fampiharana dia mahatonga ny famakiana ho zaka kokoa ary ny masontsika dia tsy terena loatra rehefa mamaky iray amin'ireo boky elektronika ireo mandritra ny fotoana fohy. Izy io dia azo alamina amin'ny fotoana tadiavintsika hampiasana ny sivana manga.
Developer: Urbandroid (Petr Nalevka)
Manandrana ity app ity manatsara ny solaitrabe Android amin'ny fanampiana fahatsiarovana kely fanampiny. Andao lazaina fa mamela antsika handika lahatsoratra bebe kokoa miaraka amin'izay ary hitantana azy araka izay itiavantsika azy mba hahafahantsika mampiasa azy amin'ny fotoana rehetra. Avy amin'ny bokotra mitsingevana no ahafahantsika mitantana tsara ireo lahatsoratra rehetra tadiavintsika.
Clip Stack - mpitantana clipboard (Maimaimpoana, tsy doka)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana 10 miaraka amina fampiasana manokana ary mety hilaina ilaina izany
Afeno ny sary ao Hidey dia hoy izy:
Valio hanafina sary ao Hidey
Gadget elektronika dia hoy izy:
Valiny amin'ny fitaovana elektronika
Ny zavatra toy izao no antony itiavako ny media sosialy
Train Conductor World dia mametraka anao eo alohan'ny lalao piozila sy lamasinina haingam-pandeha
Lalao video 5 karazana Angry Birds izay ilana fizika zava-dehibe